यसरी आफूलाई डेंगूबाट जोगाऔँ | Makalukhabar.com
यसरी आफूलाई डेंगूबाट जोगाऔँ
भाद्र २५ । डेंगूले तपाइकाे शरीरलाई आन्तरिक रूपमा क्षतिग्रस्त र कमजोर बनाउँछ । सही समयमा उपचार भएनभने याे राेग घातक साबित हुनसक्छ । डेंगूकाे प्रभाव देखिएपछि यसकाे उपचार गर्नुभन्दा पनि यसबाट बच्ने उपाय अपनाउनु उत्तम हुन्छ । आउनुहाेस् जानाै यस्ता ९ घरेलु चिजबस्तुका बारेमा जसले तपाइलाई डेंगुबाट बचाउन सहयाेग गर्दछ ।
जति सक्दाे भिटामिन सी यूूक्त खाना खानुहाेस् । भिटामिन-सीले तपाइलाइ स्वस्थ राख्नका साथै तयाइकाे राेग प्रतिराेधक क्षमता बढाउनमा मदत गर्दछ । र साथै यसले तपाइका शरीरमा कुनैपनि प्रकारकाे संक्रमण फैलिनबाट राेक्छ ।
२. हल्दीकाे प्रयोग
सामान्यतया: दाल तरकारिमा हल्दीकाे प्रयोग हुन्छ नै, यसकाे अलावा दुधमा हल्दि हालेर सेवन गर्नुहाेस् । हल्दीमा रहेकाे एंटीबायोटिक तत्वले तपाइकाे प्रतिरक्षा तंत्रलाइ मजबूत गरेर राेग लाग्नबाट तपाइलाइ बचाउने छ ।
३. तुलसी र मह
तुलसी र महकाे प्रयाेग गर्नाले पनि डेंगूबाट आफुलाइ बचाउन सकिन्छ । यसका लागि तुलसीलाइ पानीमा उमालेर त्यसमा मह मिलाएर पिउन सकिन्छ । यसका अलवा तुलसीकाे प्रयाेग चियामा पनि गर्न सकिन्छ । यसमा भएकाे एण्टिब्याक्टेरियल गुणले राेग लाग्न बाट बचाउन सहयाेग गर्दछ ।
४. मेवाकाे पात
डेंगूकाे उपचारमा मेवाकाे पातलाइ महत्त्वपूर्ण उपचार मानिन्छ । मेवाकाे पातकाे रस निकालेर दिनमा २-३ चम्चा खाएमा डेंगूबाट बच्न सकिन्छ । यसमा प्रोटीनले भरपूर पपेन नामकाे एन्जाइम पाइन्छ, जसले पाचन शक्तिलाइ सन्तुलित गर्छ यसका अलावा राताे रक्त कणकाे पनि वृद्धि गर्दछ ।
डेंगूकाे ज्वराेमा शरीरमा हुने रगतकाे कमि र कमजाेरीलाइ भगाउनका लागि अनारकाे सेवन फाइदाजनक हुन्छ । यसमा पाइने भिटामिन ई, सी, ए, फोलिक एसिड र एन्टी अँक्सीडेंट एकदमै लाभदायिक साबित हुन्छ । यसले राताे रक्त कणहरूकाे निर्माणमा पनि महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्छ । जसले शरीरमा हुने रगतकाे कमिलाइ पुरा गर्दछ ।
मेथीकाे हरियाे पातकाे सेवन डेंगूबाछ बचाउनमा मदत गर्दछ । यसकाे प्रयाेगले शरीरमा रहेका सम्पूर्ण हानिकारक र विषाक्त पदार्थलाइ बाहिर निकाल्छ । यसका अलावा शारीरिकाे दुखाइ र अनिद्राकाे समस्यामा पनि याे लाभदायिक हुन्छ । यसकाे साग या यसलाइ पानीमा उमालेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका अलावा मेथीकाे दाना पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
७. बाख्राकाे दूध
डेंगू लागेका मानिसले बाख्राकाे दूधकाे सेवन गर्नु एकदमै फाइदाजनक छ । यसका लागि बाख्राकाे काँचाे दूध दिनमा दुइ या तीन पटक पिउनु लाभदायिक हुन्छ । यसका अलावा यसले रगतकाे कमिलाइ पूर्ण गर्दछ, प्रतिरक्षा तन्त्रलाइ मजबूत गर्दछ र जाेर्निकाे दुखाइलाइ पनि लाभदायिक हुन्छ ।
८. जमराकाे जूस
जमराकाे जूस पिउनाले रगतमा प्लेटलेट्सकाे निर्माण तीव्र हुन्छ र हाम्राे शरीरमा राेग प्रतिराेधक क्षमताकाे वृद्धि हुन्छ । प्रतिदिन दुइपटक एक चिया गिलास जमाराकाे जूस पिउनाले डेंगूका साथै कैँयाै राेगहरूबाट बच्न सकिन्छ ।
यसका अलावा मच्छरबाट जति सकिन्छ बच्नु नै डेंगूबाट बच्ने प्रमुख उपाय हाे । मच्छरबाट बच्नका लागि हर समय सावधानी हुनुपर्छ र पानी जम्ने खाल्डा खुल्डी पुर्नुपर्दछ, घर बाहिर निस्कँदा लामो बाहुला भएका कपडा लगाउने, सुत्दा झुलको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ। सकेसम्म झ्याल, ढोकामा जाली प्रयोग गर्ने र अन्त्यमा डेंगुको शंका लागेमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर आवश्यक परीक्षण गर्नुपर्छ। एजेन्सी
नेपाल कोरोनाको उच्च जोखिममा, डब्लूएचओले भन्यो- 'कोरोना भित्रिँदैन भनेर ढुक्क नबस्नू'
फागुन १७, काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले नेपाललाई कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को अति उच्च जोखिम भएको मुलुकको सूचीमा राखेको छ । जेनेभास्थित मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डब्लुएचओले नेपालसहित पाँच देशलाई उच्च जोखिम भएको मुलुकको सूचीमा राखेको हो । नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र अफगा... जारी राख्नुहोस...
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सुरु भयो न्यूरो सर्जरी सेवा
फागुन १६, जुम्ला । कर्णाली प्रदेशको जिम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आजबाट न्यूरो सर्जरी सेवा सुरु गरिएको छ । प्रतिष्ठानले आजबाट डा. निलम खड्काबाट न्यूरो सर्जरी सेवा सुरु गरेको हो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) का एशोसिएट प... जारी राख्नुहोस...
के खानासँग सम्बन्धित छ पेटको आकार ?
फागुन १६, काठमाडौं । चाडपर्वको समयमा हामी धेरै खान्छौँ । धेरै परिकार बनाएर खाने चलन जो छ । यो हुन्छ कि हामी जति खाएपनि भोकाउँछौँ ।कयौँ मानिसलाई याद होला कि धेरै खाँदा आफ्नो पेटको आकार बढ्दै जान्छ । त्यसैले पनि उनीहरु अझै भोकाएको महसुष हुन्छ ।तथ्य यो कि हामी जति धेरै खान्छौँ उति धेरै भोकाउँछौँ ।भोक ल... जारी राख्नुहोस...
के हो युरिक एसिड र कसरी हुन्छ ? लक्षण र घरेलु उपचारसहित
फागुन १६, काठमाडौँ । युरिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन तथा नाइट्रोजन जस्ता तत्व मिलेर बनेको हुन्छ । यो शरीरमा रहेको प्रोटिनबाट एमिनो एसिडको रुपमा प्राप्त हुन्छ , यसको मात्रा पिसाबद्धारा शरीरबाट बाहिरिने गर्छ । तर जब शरीरमा यसको मात्रा बढ्छ, तब यो शरीरभित्र जम्मा हुनथाल्छ र हड्डीमा क्षति पुर्‍याउ... जारी राख्नुहोस...
नेपालमै पहिलो पटक स्विमिङ कोर्स र लाइफगार्ड तालिम हुने
फागुन १६, काठमाडौं । नेपालमै पहिलो पटक स्विमिङ कोर्स र लाइफगार्ड तालिम हुने भएको छ । युएईमा रहेर स्विमिङ कोर्सरलाइफगार्ड तालिम सन्चालन गरिरहेका डिस्कभरी रोयल स्पोर्ट्स एलएलसी कम्पनी सन्चालन गरिरहेका प्रबन्ध निर्देशक तथा निस्शुल्क प्राथमिक उपचार तालिमका अभियन्तार मुख्य प्रशिक्षक ओमप्रसाद उप्रेतीले उक... जारी राख्नुहोस...
डब्लुएचओको चेतावनी- 'कुनै देशले कोरोना भित्रिन्‍न भनेर बसे गम्भीर गल्ती हुनेछ'
फागुन १६, काठमाडौं । कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण विश्वभर फैलन थालेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले सङ्क्रमणविरुद्धको लडाइँ निर्णायक चरणमा पुगेको बताएको छ ।डब्लुएचओका महानिर्देशक टेड्रस एड्हानोम गेहब्रेयससले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणविरुद्धको लडाइँ अब निर्णायक चरणमा पुगेको बताएका हुन् । उनले चीनबाट सुर... जारी राख्नुहोस...
मुसहर किशोरीलाई तालिम
फागुन १५, चितवन । खैरहनी नगरपालिकामा रहेका मुसहर समुदायका किशोरीलाई किशोरी शिक्षा तालिम दिईएको छ । खैरहनी नगरपालिकाले वडा नम्वर १० कठारमा रहेका मुसहर किशोरीलाई दुई दिने तालिम दिएको हो ।तालिममा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा किशोरी अवस्थाका लक्षणहरु र गर्नु पर्ने क्रियाकलाप , जीवनउपयोगी शिप, आत्मजागरण... जारी राख्नुहोस...